Uncategorized – Page 62 – Shabakadda Amiirnuur
Sidee buu Cudurka Aidis-ka ku gaaray Ciraaq? (Warbixin)
Warbixin cusub oo soo baxday ayaa lagu ogaaday in sababta keentay in cudurka AIDISKa gaaro dalka Ciraaq ay ahayd dawooyin ay soo saarto shirkad laga leeyahay wadanka Faransiiska. Shirkadda MARIO oo ah shirkad laga leeyahay wadanka Faransiiska ayaa bartimihii sideetemayadii waxay heshiis la gashey wasaaraddii caafimaadka ee dowladda Ciraaq, waxaana […]
Ciidamada Dowladda Oo dad shacab ah ku dilay Shabeellaha Dhexe.
Faahfaahin dheeri ah ayaa kasoo baxaysa weerar hubeysan oo ay ciidamo ka tirsan DF ka geysteen deegaan dhaca duleedka degmada Balcad ee Sh/dhexe. Xogta ayaa ku waramaysa in ugu yaraan sedax qof oo safarrey ahaa ay dhinteen kadib markii ciidanka dowladda oo isbaaro utiillay wadada laamiga ah ay rasaas ku […]
Askar Itoobiyaan Ah oo Dhimasho Iyo Dhaawac Ku Noqday Qarax Lagula Beegsaday Hiiraan.
Guutada Qaraxyada ee Xarakada Al-Shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay weerar la beegsaday ciidamada Xabashida ah ee heysta degaanka Halgan ee gobolka Hiiraan. Qaar kamid ah askarta Xabashida ayaa qarax lala helay xilli ay lugeynayeen afaafka hore ee magaalada, waxaana kasoo gaaray khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac. Inta la xaqiijiyay […]